५ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने सरकारी कर्मचारीले गरे अात्मसमर्पण ! - Everest Dainik - News from Nepal
५ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने सरकारी कर्मचारीले गरे अात्मसमर्पण !
काठमाडौं, असोज १२ । दोलखामा पाहुना लाग्न गएका एक सरकारी कर्मचारीद्वारा ५ वर्षीया बालिका बलात्कृत भएकी छन्।
तामाकोशी गाउँपालिका ५ की ५ वर्षीया बालिका आफ्नै छिमेकी ५२ वर्षीय सरकारी कर्मचारीबाट बलात्कारको शिकार भइन्।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय दोलाखाका करारका कर्मचारी कमल बजागाईले ती बालिकालाई गत भदौ २१ गते बलात्कार गरेका थिए । पाहुना लाग्न गएका उनले बेलुकाको खाना खाने बेला बालिकालाई बलात्कार गरेको दोलखाका डिएसपी वासुदेव पाठकले जानकारी दिए । चिच्याएको सुनेपछि ती पाहुनालाई खाना पस्कँदै गरेकी बालिकाकी आमा दौडेर अर्को कोठामा पुगेकी थिइन् । त्यतिबेला बालिकाको योनीबाट रगत बगिरहेको थियो ।
याे पनि पढ्नुस बालिका बलात्कार गर्नेलार्इ मृत्युदण्ड, अदालतको फैसलाको सर्वत्र स्वागत
बगजाईंले ‘गल्ती भयो क्षतिपूर्ति दिन्छु, उपचार गर्दिन्छु’ भनेर उनले परिवारलाई फकाएका थिए । परिवार नमानेपछि उनी पस्किएको खाना खानै छाडेर फरार भएका थिए । बजगाई फरार भएपछि प्रहरीलाई खबर गरिएको थियो । उनी काठमाडौं आएको जानकारी पाएपछि असईको कमान्डमा ३ जनाको टोली काठमाडौं परिचालन गरिएको डिएसपी पाठकले जानकारी दिए ।
‘आफू पक्राउ पर्नसक्ने बुझेपछि बिहीबार दिउँसो बजगाईंले कोटेश्वर प्रहरीमा गएर आत्मसमर्पण गरेछन्’, डिएसपी पाठकले भने । बजगाईंलाई बिहीबारै दोलखा लगिएको छ । उनले आफूले बलात्कार गरेको स्विकार गरिसकेको प्रहरीले जनाएको छ।
उनी चरीकोटबाट घर बनाउन भनेर आफ्नो गाउँ तामाकोसी गएका थिए । उनको करार अवधि केही दिनअघि मात्रै सकिएको बताइएको छ। नेपाललाइभबाट